Thit Htoo Lwin: 12/4/11 - 12/11/11
လွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဦးခင်အောင်မြင့်ရဲ့နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး တွေ့ဆုံချိန် တနာရီလောက် ကြာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းကတော့ အခုလို တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကို ကြားရတာ ရှိပေမယ့် အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။လွှတ်တော်အကြီးအကဲ ဦးခင်မောင်မြင့်ဟာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း၊ ဒါဟာ ဖျောက်ဖျက်လို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းမ် သတင်းဂျာနယ်နဲ့ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ မှတ်ပုံပြန်တင်မယ်ဆိုရင် လွှတ်တော် အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ မိမိနဲ့တကွ လွှတ်တော်ထဲက ကိုယ်စားလှယ်တွေက ကြိုဆိုမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ပြည်သူတွေ ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝတဲ့ ပညာတတ်တယောက် ဖြစ်တာကြောင့် နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် အများကြီး အားကိုးရမှာ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
12/12/2011 09:55:00 PM
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်များ ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းထားရန်အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က ညွန်ကြားစာ ပို့ထားကြောင်း သိရသည်။ ကချင် စစ်ပြေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပထမဆုံး အကြိမ်ငွေကျပ်
သိန်း ၇၀၀ နှင့် အဝတ်အထည်များ ပေးအပ်ပွဲနှင့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို တနင်္လာနေ့က ပြုလုပ်ရာ၌ ၎င်းစာအား ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငံဆိုင်းက
ဖတ်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ကယ်ဆယ်ရေး အလှူငွေ ပေးအပ်ပွဲလုပ်ရင်းနဲ့ ဂျာနယ်သတင်းထောက်တွေကို ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပါတယ်။ အဓိကတော့
တပ်ထိုးစစ်မဆင်ဖို့၊ ခုခံတိုက်ခိုက်ရုံမှလွဲပြီးမှ စစ်ကြောင်းမထိုးဖို့၊ သွားပြီးတော့မှ မတိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ စာဖတ်ပြ တာပါ”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နီးစပ်သူ တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ မြို့တော်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကာ နံနက် ၈ နာရီမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းပွဲကို ပြည်နယ်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်များများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊
ရပ်မိရပ်ဖများ၊ သတင်းထောက်များအပါအဝင် စုစုပေါင်း လူ ၆ဝဝ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ “ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက် ဦးစီးဦးဆောင်တွေ အလုပ်လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ အချင်းချင်း အထင်မှားအမြင်မှားမဖြစ်ဖို့” ဟု အခမ်းအနား တက်ရောက်သူ မြစ်ကြီးနားမြို့ခံတဦးက ဆိုသည်။ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ကမူ အဆိုပါညွန်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင် မသိရသေးကြောင်းနှင့် အစိုးရဘက်မှ ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး ယနေ့ထိ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ဆိုသည်။ “ဒီနေ့ထိ
တိုက်ပွဲဖြစ်နေတုန်းဘဲ။ အခု တပ်အင်အားတွေ ထပ်တိုးချဲ့မယ့် အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိနေသေးတယ်။ မနက်ဖြန်လည်း စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အစိုးရတပ် ကျနော်တို့ နယ်မြေထဲမှာ ဝင်ရောက်နေတယ် ဆိုရင်လည်း မရဘူး။ ကျနော်တို့က လုပ်သင့်တာ ဆက်လုပ်ရမှာပဲ” ဟု KIO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။မိုးမောက်မြို့နယ် KIA တပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၁၅ နယ်မြေအတွင်း ယနေ့ထိ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု KIO စစ်ဘက်သတင်းများအရ သိရသည်။အလားတူ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ ၄ နယ်မြေ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းတွင်လည်း ယခုလ ၁ဝ ရက်နေ့မှ စတင်၍ KIA ၏ တပ်ရင်း ၉ နယ်မြေအတွင်းသို့ အစိုးရတပ်များ ယနေ့ထိ ဝင်ရောက်လာနေဆဲဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။ “ကွတ်ခိုင်နယ် ဟူးဖြတ်ဒေသဘက်မှာ လက်နက်အပြည့်ပါလာတဲ့ လားတွေနဲ့ စစ်သား ၁ဝဝ ကျော် တနေ့ကနေ ကျနော်တို့ ရင်း ၉ နယ်ဘက်ကို ဝင်လာနေတာဘဲ။ သမ္မတက စာပို့တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီနေ့ ၁၂ ရက်လေ။ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုက လုံးဝ မရပ်သေးဘူး။ ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ တပ်တွေဆုတ်တာ မရှိသေးဘူး။ အစိုးရက အမြဲတမ်း လိမ်နေတော့ ပြောတာနဲ့လုပ်တာ တခြားစီပဲ”ဟု တပ်မဟာ ၄ တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ရော်က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
မြန်မာအိမ်ဖော် တယောက်ရဲ့ သေကြောင်းကြံမှု သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန် အကြံပြုခြင်း
Suspected suicide attempt at KPE flyover. ဆိုတဲ့
သတင်း ပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့ အချိန်မှာပဲ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေနဲ့ Facebook ပေါ်မှာ သတင်းတွေ အနေနဲ့ တင်ခဲ့ကြတယ်။ ကျမလည်း သတင်းတခု အနေနဲ့ မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို အတိုင်း တင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲ ကွန်မန့်တွေ အများကြီး တက်လာခဲ့ကြတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် အတွေးအမြင်၊ အယူအဆ ကွဲပြားတဲ့ ကွန်မန့်တွေပေ့ါ။ တချို့ကလည်း စိတ်မကောင်းတဲ့ အကြောင်း၊ တချို့ကလည်း စိတ်ညစ်စရာလို့ ခံစားရတယ်၊ တချို့ကလည်း ဒီလို လုပ်ကြံသတ်သေတာကိုပဲ စတိုင်လုပ်သလို အပြစ်မြင်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်... အမှန်တော့ ဒါက တကယ် မလုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်ပ့ါ။
ဒီတကြိမ်နဲ့ပါ ဆိုရင် မြန်မာမိန်းကလေးတွေ စင်္ကာပူမှာ သေကြောင်းကြံတာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို (၂ )
ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ပထမတခါ မရင်ငြိမ်းအေး သတ်သေတဲ့ ကိစ္စကတော့ သူ့ရဲ့ နှလုံးသာရေးရာပေ့ါ။ အခု တကြိမ်ကလည်း ဘာကြောင့် သေကြောင်းကြံတယ် ဆိုတာ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ သူမရဲ့ အလုပ်က အိမ်ဖော်အလုပ်ဆိုတာရယ်၊ သူမဟာ Made Agency ကနေ ထွက်ပြေးလာတာလို့လည်း သိရတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီမှာ ကွာခြားတာလေးကို ပြောပြချင်တာပါ။
စကာင်္ပူမှာ အိမ်ဖော် လာလုပ်ကြရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံ ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဖစ်လစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှာ၊ ယိုးဒယားနဲ့ မြန်မာပြည်က မိန်းကလေးတွေပါ။ အဲ့ဒီလို လူမျိုးစုံထဲကမှ မြန်မာပြည်က အိမ်ဖော်တွေ ရတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ တခြားနိုင်ငံက အိမ်ဖော်တွေ ရတဲ့ အခွင့်အရေး
အများကြီး ကွာခြားပါတယ်။ ကျမနဲ့ အိမ်မှာ တခန်းတည်း အတူနေခဲ့တဲ့ ညီမလေး တယောက်က Maid Agency မှာ ရုံးဝန်ထမ်း လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူပြောပြသမျှကို
မြန်မာအိမ်ဖော်တွေ အဓိက အနှိမ်ခံရတဲ့ အချက်တွေက ဘာသာစကား အားနည်းမှု၊ မိမိ အလုပ်ရှင်ကို ရိုသေလေးစား အားနာမှု၊ သည်းခံတတ်မှုတွေကြောင့် အလုပ်ရှင် အိမ်ရှင်တွေက အတင့်ရဲစွာနဲ့ အနိုင်ကျင့် နှိမ်ချရဲတာပါ။ အိမ်ဖော်ချင်း အတူတူ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ မြန်မာ ရတဲ့ အခွင့်အရေး ကွာခြားတာကို ကျမ ရှင်းပြပါ့မယ်။
ဖိလစ်ပိုင်က လာတဲ့ အိမ်ဖော်တွေက သူများနိုင်ငံမှာ အိမ်ဖော် သွားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် မသွားခင်မှာ
အရင်ဆုံး သင်တန်းတက်ရတယ်။ ကိုယ်လုပ်မယ့် လူမျိုးတွေရဲ့ စရိုက်၊ နေထိုင်မှု၊ သန့်ရှင်းရေး၊ စားပုံသောက်ပုံ၊ ချက်ပြုတ်တာတွေကအစ သင်ခဲ့ကြတယ်။
မြန်မာပြည်က လာတဲ့ အိမ်ဖော်မိန်းကလေးတွေက အများအားဖြင့် နယ်က ကလေးတွေဖြစ်ကြတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ အဆင်မပြေလို့
ရှိသမျှလေး ပေါင်နှံပြီး Agent တွေကို မတန်တစ ပေးပြီး ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ တချို့ဆိုရင် သူတို့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိပဲ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ လိုက်လာတာမျိုးတွေ တပုံကြီးပါ။ လေဆိပ်ရောက်တော့မှ Agent က
သူတို့ လက်ထဲကို In-Principle Approvals (IPA Letter) ထည့်ပေးလိုက်မှ သူတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်နေရာကို မြင်မှ သိလိုက်ရတဲ့ သူတွေလည်း
ဒုနဲ့ဒေးပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ နောက်ဆုတ်လို့လည်း မရတော့ဘူး။ ဒီတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီး ရောက်ခဲ့ကြရပြန်ရော။ တချို့ဆိုရင် အဲ့ဒီ In-Principle Approvals (IPA Letter) ကိုတောင် နားမလည်ပါဘူး။ ဘာမှန်းညာမှန်း မသိပဲ အလုပ်ရချင်တဲ့ စိတ်လေး တခုတည်းနဲ့ ရောက်ခဲ့ကြတာ။
ဘယ်မှာလည်း သင်တန်းတွေ၊ ဘာသာစကား လေ့လာမှုတွေ၊ လုပ်ငန်းတဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ... တကယ့်ကို ဘာမှ မရှိပဲ ရောက်လာကြရတာပါ။ ဒီတော့ သူများနဲ့ ယှဉ်ပြီးလည်း ရွေးရော မြန်မာလူမျိုးက ဘာမှ မတတ်ဘူးဆိုပြီး Agent ကစလို့ လစာကို နှိမ်ပြီး သတ်မှတ်တော့တာပဲ။ အလုပ်ရှင်တွေဆီ ပို့ပြန်တော့လည်း တခြားနိုင်ငံသားတွေကို စကာင်္ပူ လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား (အနောက်နိုင်ငံသား) အိမ်တွေကို ပို့တာများတယ်။ မြန်မာတွေက ဘာသာစကား အားနည်းလို့ ဆိုပြီး စလုံးတရုတ် အိမ်တွေကို ပို့တယ်။ တခြားနိုင်ငံသားတွေ တလကို စကာင်္ပူဒေါ်လာ (၆၀၀) ရတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာလူမျိုးကို တလ စကာင်္ပူဒေါ်လာ (၃၅၀) ပဲပေးတယ်။ အလုပ်နားရက် ပေးပြန်တော့လည်း တခြားလူမျိုးတွေက တပတ်ကို (၁)ရက် ခံစားခွင့်ရတယ်။ မြန်မာလူမျိုးကို တလမှ (၁) ရက်ပဲ ခံစားခွင့် ပေးတယ်။
အခုပြောပြတာတွေက ကျမတို့သိထားတဲ့ အပြင်ပန်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တကယ် အလုပ် လုပ်ရတဲ့ ကာယကံရှင် အိမ်ဖော်တွေက သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဘ၀မှာ ကျမတို့ မသိနိုင် မမြင်နိုင်တဲ့ နာကျင်မှုတွေ၊ ခံစားမှုတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် အိမ်ရှင်က ကိုယ်ထိလက်ရောက် နာကျဉ်အောင် ရိုက်နှက်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့လို ဖြစ်လို့ Agent ကို အကြောင်းကြားရင် Agent က အလုပ်ရှင်ဘက်ကနေပဲ ရပ်တည်ပါတယ်။ လူတယောက်ဟာ အကြောင်းမဲ့နဲ့တော့ ရခဲ့လှတဲ့ လူဘ၀ကြီးကို စိတ်ကုန်ပြီး ကိုယ့်အသက်ကိုတောင် နှမြောရမှန်း မသိတော့အထိ မိုက်မဲမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ သူ့မှာလည်း သူ့ရဲ့ ခံစားချက်၊ အကြောင်းပြချက်တွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ တခါမှ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ခဲ့ဘူးပဲနဲ့ စင်္ကာပူရောက်မှ အခုလို အိမ်ဖော်ဘ၀ လုပ်ရတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။
အရင်က ကျမနဲ့ ခင်တဲ့ ညီမလေး တယောက်ဆိုရင် အခုလို မြန်မာအိမ်ဖော်တွေ အတွက် သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ပိတ်ရက်တွေမှာ လိုအပ်တဲ့ လူမှုရေး၊ ငွေရေး ကြေးရေး အကူအညီတွေ ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ကျမတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ ကံကံရဲ့ အကျိုးဆိုပြီး ကံကိုပဲ ပုံချလိုက်ကြတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို အဖြစ်အပျက်မျိုးကို အပစ်တင်ခြင်းထက် စာနာ နားလည်ပေးပြီး ဒီလိုဘ၀တွေကို ကျမတို့ ဖေးမ ကိုယ်ချင်းစာပြီး နှစ်သိမ့်ပေးသင့်ပါတယ်လို့ ဝေဖန် အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၁၂ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁
12/12/2011 08:49:00 PM
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချ
မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး လို့ယူဆရသူ တစ်ဦးဟာ ယဉ်များအလွန် ကြပ်လေ့ရှိတဲ့ လမ်းပေါ်သို့ မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချခဲ့တာကြောင့် အခုဆေးရုံတင်ထားရကြောင်း
တရုတ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ သတင်းစာတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မိုးပျံလမ်း Kallang-Paya Lebar နှင့် the Pan-Island အဝေးပြေးလမ်း Sims လမ်းမကြီးတို့ဆုံရာနေရာသို့ ခုန်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ အိမ်ပေါ်လုပ်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်မည်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ယင်းမိန်းကလေးဟာ ခုန်မချခင် Katong Shopping Centre ရှိ အိမ်အကူအလုပ်သမား ရှာဖွေပေးရေးအေဂျင်စီမှ ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်မြင်များ၏ပြောပြချက်အရ သူမဟာ မိုးပျံလမ်းရဲ့အစွန်းကပန်းခင်းပေါ်မှာ မက်တက်ရပ်ပြီး လက်တွေကိုဆန့်တန်းကာ အောက်ကိုခုန်ချတာ လို့သိရပါတယ်။
မိန်းကလေးကို လမ်းဘေးဖယ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအမျိူးသမီးဟာပြုတ်ကျလာတဲ့ အချိန်မှာသစ်ကိုင်း တစ်ကိုင်းပေါ်ကို တစ်ဆင့်ပြုတ်ကျပြီး သစ်ကိုင်းလည်းကျိုးကျခဲ့ပါတယ်။ သစ်ကိုင်းပေါ်က တဆင့် ကျလာခဲ့တဲ့အတွက် အရှိန်အနဲငယ်ကိုလျော့ ပါးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လမ်းမဘေးက ကားတွေလမ်းမကြီးပေါ်ကနေ အရေးပေါ်ဘေး ထိုးထားဖို့ နေရာလေးပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာပြီး ညာဖက်လက်နဲ့ ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ Tan Tock Seng ဆေးရုံကိုသယ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူဟာ ဝေဒနာများခံစားနေရသော်လည်း သတိတော့ကောင်းစွာရနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုအခု အရေးပေါ်ဆောင်မှာ ထားပြီးလုံးဝလှုပ်ရှားခွင့်မပေးထားပါဘူး။
မလုပ်ခင်မှာ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တစ်ခြားအိမ်အကူအမျိုးသမီးတွေကိုပြောပြခဲ့ တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်အဲသည် လိုဆန္ဒရှိနေတယ် ဆိုတာကိုတော့ မပြောခဲ့ပါဘူး။
By: သစ်ထူးလွင် Suspected suicide attempt at KPE flyover
A woman has been hospitalised after she jumped off an expressway flyover yesterday.
The woman from Myanmar is believed to be in Singapore to work asamaid.
She had run away fromamaid agency in Katong Shopping Centre before ending up at the flyover, located at the intersection between the Kallang-Paya Lebar Expressway, the Pan-Island Expressway and Sims Drive.
Witnesses say that she had stood onaflowerbed on the ledge of the flyover with her arms spread, before jumping 4.5m to the road below.
She was luckily not run over by any vehicles despite busy traffic at the stretch of road.
A taxi has passed by as the woman jumped.
The shocked driver pulled over at the road shoulder to notify the police about the incident.
The woman was said to have landed partially onasmall tree, breaking its branches which appeared to have absorbed the impact of her fall.
She landed on the road shoulder and broke her right arm and left leg.
She was conscious but in pain when she was sent to Tan Tock Seng Hospital
She is currently inahigh dependency ward and confined to bed.
Prior to the incident, she was said to have told other maids that she wanted to kill herself but it is unknown why she wanted to do so.
Source: Lianhe Wanbao, 11 December 2011
တရုတ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် အထက်မြန်မာပြည်က အလှူငွေ ဆက်လက်သိမ်းကျူံးယူနေ
မန္တလေးရောက် တရုတ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်
တရုတ်နိုင်ငံမှ ပင့်ဆောင်လာသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ဖူးမြော်ရန်အတွက် တောင်ကြီးမြို့မှ မန္တ လေးမြို့သို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ကြသူများပြား၍ တောင်ကြီး-မန္တလေးမော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ အားလုံးနေ့စဉ် ကြိုတင်ဘိုကင်များဖြင့် ပြည့်နေပြီး ပုံမှန်စီးရေထက် သုံးဆတိုး၍ စီစဉ်ပေးနေရကြောင်း၊ ယာဉ်လိုင်းတာဝန်ရှိသူ များထံမှ သိရသည်။
နေပြည်နေတော်၊ ရန်ကုန်မြို့များသို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ကြွရောက်အပူဇော်ခံစဉ်က တောင်ကြီး မြို့မှ သွားရောက်ဖူးမြော်သူ အများအပြားရှိခဲ့သော်လည်း အများစုမှာအနီးဆုံး အပူဇော်ခံဌာန ဖြစ်သော မန္တလေးမြို့သို့ ယခုကဲ့သို့ အများအပြား သွားရောက်ဖူးမြော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဘုရားဖူးအဖွဲ့များထံမှ သိရသည်။
" ကျွန်တော်တို့ ယာဉ်လိုင်းမှာတောင်ကြီးကနေ မန္တလေးကို ယာဉ်စီးခတစ်ဦး ကျပ် ၆၀၀၀ ပဲယူ ပါတယ်။
ခါတိုင်းအချိန်တွေမှာ ပုံမှန်တစ်နေ့သုံးစီးပြေးဆွဲပေးနေမယ့် အခုမြတ်စွယ်တော် မန္တလေးကို ကြွတဲ့ရက် တွေမှာတော့ တစ်ရက်ကို ရှစ်စီးအထိ တိုးချဲ့ပြေးဆွဲပေးရုံးမက တချို့အဖွဲ့တွေဆို သီးသန့်စီးလုံးငှားပြီး သွားကြ
တာ၊ တစ်ရက် နှစ်စီး၊ သုံးစီးရှိပါတယ်။ တောင်ကြီးကနေ ညနေ ၅ နာရီခွဲထွက်ပြီး
မန္တလေးကို နောက်တစ်နေ့ မ နက် ၄ နာရီခွဲ၊ ၅ နာရီလောက် ဆိုက်တာမို့ ဘုရားဖူးခရီးသည်တွေအတွက် စွယ်တော်ဖူးဖို့ အချိန်အဆင်ပြေပါ တယ်။ ဘုရားဖူးသွားတဲ့သူများ လွန်းလို့ ကျွန်တော်တို့ ယာဉ်လိုင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ
တခြားယာဉ်တစ်ခု တည်းမဟုတ်ဘဲ တခြားယာဉ်လိုင်းတွေလည်း ယာဉ်စီးရေတိုးချဲ့ပြေးဆွဲပေးနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်" ဟုရွှေ တောင်ရိုးမော်တော် ယာဉ်စီးရေတိုးချဲ့ ပြေးဆွဲပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်" ဟုရွှေတောင်ရိုးမော်တော် ယာဉ် လိုင်းမှ ဦးခင်မောင်ချစ်က ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့သည် နတ်တော်လပြည့်နေဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့သည် လည်း တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သောကြောင့် ရုံးပိတ်ရက်ကျောင်းပိတ်ရက်များ ဖြစ်၍မိသားစုများမှာ မြစ်စွယ်တော်ဖူးရန် သာမက မန္တလေးမြို့ရှိ ဘုရားများများဖူးမြော်နိုင်သည့်အပြင် ပြင်ဦးလွင်၊ ရွှေပေါ်ကျွန်း၊ ပလိပ်မြို့ မြွေဘုရား အထိသွားရောက်ရန် အချိန်လုံလောက်ခဲ့၍ ယခုကဲ့သို့ စုပေါင်းသွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆရာမတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်ဟု Weekly Eleven News Journal မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။
တရုတ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ရန်ကုန်မြို့ မှာ အလှူငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း (၂၅၀၀) ကျော် တရုပ်နိုင်ငံ အတွက် ယူဆောင်သွားတဲ့ သတင်းအပေါ်မှာ MNN စာဖတ်ပရိတ်ရဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ပူးတွဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလို အလှုမျိုးဟာ တကယ်ဘဲ လှုတဲ့သူအတွက် အကျိုးရှိသလားဆိုတာ ....
မှန်တယ်ကွ တကယ်တော့ ဒို့မြန်မာလူမျိုးတွေက ယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတာ တကယ်တမ်းကျတော့ အကျိုးရှိမည့် နေရာတွေကိုသာ လှူသင့်တယ် အခုစွယ်တော်က ဘာသာရေးကို အဓိကထားပီး လာတာမဟုတ်ဘူး သူတို့နိုင်ငံရေး အဆင်မပြေလို့ လေပြေထိုးတဲ့အနေနဲ့ လာတာ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး စွယ်တော် အစစ်ပါလို့ ဘယ်သူအာမခံရဲလဲ
Lu Nga Tay
အထက်ပါအယူအဆကို ထောက်ခံပါတယ်.ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပြောချင်ပေမဲ့ ပြောလို့မထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်. ကိုယ်တိုက်ကအိတ်စိုက်လှူရတာမဟုတ်ဘဲ သူများလှူတာကို မုဒိတာ မပွားနိုင်တဲ့ ဝန်တို မစ္ဆရိယစိတကြီးထားရင် အပယ်လားမှာ စိုးကြောက်လို့ပါ။ တကယ် အမှန်တရားကို အရှိအတိုင်းခြေခြေမြစ်မြစ်
ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင် MNN ကပြောသလိုပဲ ဒက်ထိပဲ..
December 12, 2011 7:57 AM
စေတနာသဒ္ဒါတရားနဲ့ လှူဒါန်းကြတဲ့သူတွေ ရှိကြသလို ...... အာဏာပိုင်က ဆိုင်ရာ ပိုင်ရာတွေကို ဖိအားပေးပြီး အလှူငွေ ထည့်ဝင်ခိုင်းကြတာလဲ ရှိကြပါတယ် ... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ... လှူဒါန်းကြတာတော့ ကောင်းပေမဲ့ ... တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာ ... အကူအညီတွေ လိုအပ်နေတဲ့နေရာကို လှူဒါန်းတာက ပိုပြီး အကျိုးရှိစေတာ အမှန်ပါ ....
ပြည်သူအများစုဟာ ပြည့်စုံလုံလောက်နေလို့ မိမိတို့သဒ္ဒါတရားရှိရာကို စိတ်ကြိုက်လှူဒါန်းကြတာ အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ .... ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူလူထု အခြေအနေနဲ့ ယခုလို လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာတော့ ... တခုခုတော့ မှားနေသလို ဖြစ်နေတယ် ... ဒီအလှူငွေတွေက တရုတ်ပြည်ကို ပေးအပ်ရမယ်
ထင်တယ် ...... ဒီအလှူတွေမှာ ကိုယ်ကတော့ မပါခဲ့ပါဘူး ... ဒါပေမဲ့ ... မုဒိတာပွါးပြီး သာဓုမခေါ်နိုင်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ ... ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဒီအလှူငွေတွေကို ကိုယ့်နိုင်ငံက တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေ မရှိနွမ်းပါး ဆင်းရဲချို့တဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုသာ လှူဒန်းဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ အတွေးဝင်နေခဲ့မိလို့ပါ ... အဲဒီလို အတွေးရှိခဲ့လို့ တကယ်လို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိခဲ့ရင်လည်း အပြစ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမယ်လို့ မထင်ပါဘူး ....
ရေရှားတဲ့ဒေသမှာ ရွာတဲ့မိုးဟာ ... ရေတွေ ပေါကြွယ်နေတဲ့ ဒေသမှာ ရွာတဲ့မိုးထက် ပိုတန်ဖိုးရှိ ပိုအကျိုးရှိတတ်တာ သဘာဝပါ ........
စွယ်တော်ရယ်၊ ဆံတော်ရယ်၊ ရုပ်ပွါးတော်ရယ်၊ ဘယ်ဟာက တန်ခိုးပိုကြီးသလဲ။ တန်ခိုးကိုကိုးကွယ်မှာလား၊ ဘုရားအဆုံးအမကို ကိုးကွယ်မှာလား၊ ဆရာတော် ဥုးသုမင်္ဂလကဟောတယ် ဘာဘဲရှုံးရှုံးတဲ့ ဥာဏ်မရှုံးစေနဲ့ တဲ့။ ဥဏ်နဲ့ ယှဉ်တဲ့အ လှူကပိုပြီ မြင့်မြတ်ပါတယ်။ တရုတ်တွေကတော့ မြန်မာတွေကို ဘယ်လိုအချဉ်ဖမ်းရမယ်ဆိုတာ နပ်ပြီးသားမို့ လို့သိပ်ပြီးမအကြပါနဲ့ လို့ပြောချင်ပါတယ်။ နယ်စပ်ကနေခိုးယူတာ၊ ဗြောင်းယူတာ၊ အားမရလို့ပြည်တွင်းကငွေကို လာနှိုက်တာ။ သိပ်ပြီးမအကြပါနဲ့ လို့ ထပ်ပြောချင်တယ်။
စွယ်တော်မြတ်ကို သဒ္ဒါလို့လှူဒါန်းပါတယ်။ အလှူငွေတွေဟာ တရုတ်ကို လှူတာမဟုတ်ပါဘူး။ စွယ်တော်မြတ်ကိုသာလှူတာပါ။ အလှူငွေကို တရုတ်တွေယူတယ်လို့ သဘောထားရင်၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေးနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး ကြည့်ရင် ဘာသာရေးအတွက် မကောင်းပါဘူး။ နိုင်ငံရေးဟာ နိုင်ငံရေးပါ။ ဘာသာရေးဟာလည်း ဘာသာရေးပါဘဲ။ ဘာသာရေးကသာ ပိုမွန်မြတ်တာပါ။ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအဖြစ် အသုံးချလိုက်ရင် နောက် တစ်ကြိမ် စွယ်တော်မြတ်ကြွလာရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်။ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကြည်ညိုမှု ပြက်ပြားနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး မရောတာ အကောင်းဆုံးပါ။ သတင်း ဆောင်းပါးရှင်များ ရောထွေးမရေးသင့်ပါ။
ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာ ကိုးကွယ်ရာမရှိရော့လေသလား....
သူများနိုင်ငံက ခုတုံးလုပ်သွားတဲ့ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်ကိုမှ ကိုးကွယ်ရာထင်နေကြတယ်....
မိမိအိမ်က ဘုရားကို ဆွမ်းပုံမှန်ပဲကပ်ကြပါဦးရွှေမြန်မာတို့ ရေ...........
ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်...ခပ်ရွတ်ရွတ် တစ်ယောက်က မြန်မာတွေ ဘယ်နေရာတော်
လဲလို့ ဖွလိုက်တော့ စိတ်ဆိုးလိုက်ကြတာ...တရုတ်က စွယ်တော်အစစ်ဆိုပြီး
အပူဇော်ခံ....မြန်မာပြည်တွင်းမှာလဲ ဘုရားတွေ စွယ်တော်တွေ အများကြီးပါ..
နောက်ဆုံးတော့ ပိုက်ဆံတွေ တရုပ်ပြည်ရောက်ကုန်တာဘဲ။တရုပ်ပြည်ကအပေါ
စားတွေကို ဈေးကြီးပေးဝယ်။ကိုယ့်ပြည်တွင်းက အဖိုးတန်တွေ ဈေးပေါပေါနဲ့
ထုတ်။ဘုရားတောင်မှ တရုတ်စွယ်တော်က အစစ်ဆို ရိုက်သွားသေးတယ်။
ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားယင် နောက် နှစ် ၅၀ ဆို ဗမာပြည်မွဲလောက်တယ်။
ဘာဘဲပြောပြောဗျာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုက ညံ့တာပါ။
ဘာသာရေးကို တိုက်ခိုက်ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီငွေတွေ လှူလိုက်တာ
ဘုရားဆီရောက်သွားပါတယ်ဆိုတာ ဘာနဲ့အထောက်အထားပြမလဲ ?
အမှန်ကတော့ အဲဒီငွေတွေဟာ ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ
အတွက်၊ စစ်ဘေးဒါဏ်သင့်လို့ ဒ့ကဃရောက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်
I agree with this statement. Iမြန်မာလူမျိူးတွေ ရဲ့လှူဒါန်းပုံမှာ လွဲမှားနေသည်ဟု ယူဆပါသည်။
we can do now is to educate your parents, relatives, neighbors to think
wisely and direct the donation to needing monasteries around the country as much as we can.
ကျုပ်တို့အစိုးရကလဲ ရခိုင်ပြည်က ခိုးလာတဲ့ ဆင်ဖြူတော်ကြီးတွေကို တရုပ်
နိုင်ငံကို လှည့်လည်ပြသ အပူဇော်ခံပြီး အဲဒီငွေတွေ ပြန်ရအောင်လုပ်ကြည့်ပါလား
ဒါမှမဟုတ် ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အစစ်အမှန်ကျန်ခဲ့
တဲ့ တံခိုးကြီးပစ္စည်းတွေရှိတာဘဲ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင်ပြီး
အခုလိုမျိုး တရုပ်ပြည်မှာ သွားပြီး အပူဇော်ခံ အလှူခံကြည့်ပါလား ငွေတော့ရမှာ
မဟုတ်ဘူး တရုပ်ကနေ ဗမာပြည်ကို လေးဘက်ထောက်ပြီးပြန်လာရမှာသေချာတယ်။
မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လှူဒါန်းခြင်းဟာ ဥာဏ်ပညာမပါတဲ့အတွက် အကျိုးမရဘူးမဟုတ်ပေမယ့် အကျိုးမများတာတော့ ဘုရားဟောကျမ်းဂန်များမှာ အတိအကျပြဆိုထားပါတယ်၊ တရုတ်ဆိုတာ လူသားစိတ်မရှိသူတွေ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့သူတွေဆိုတာ တကမ္ဘာလုံးသိပါတယ်
အော် မြန်မာတွေ မြန်မာတွေ ...အဲ့ဒီ ငွေတွေ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေ ..ငတ်နေတဲ့ လူတွေ အများကြီး ကို လှူရင် ပိုမမြတ်ပေဘူးလား...
ဗုဒ္ဒဘုရားရှင် ရှိနေရင် မြန်မာတွေ စိတ်ဓာတ် အယူအဆ တွေ လွဲမှားနေတာတွေ ဆုံးမလိုက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်း..
အနောက် နိုင်ငံတွေ ရဲ့ အယူဝါဒ က သာ မှားနေကြတာ..စိတ်ဓာတ် ပိုင်းမှာ တော့ ဘုရား ဆုံးမတော် မူ ခဲ့ တဲ့ အတိုင်းကျင့်ကြံ ကြတယ်..
အလှူ ဒါန မှာ ဆိုလည်း သူတို့ လုပ်ကိုင်ပုံက လေးစားဖို့ကောင်းတယ်
............မြန်မာ မြန်မာ...ဗုဒ္ဒဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့ လူတွေက ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်တာ လဲ....
အော် တခုရှိ သေးတယ်...ကြုံတုန်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်..
ကမ္ဘာအေး မှာ စွယ်တော် ရောက်တော့ ဖူးကြ တဲ့ လူတွေ ပြောပြ တာ ကြားရတာက ...တခါဖူးဖို့ ၄ နာရီ ကြာတယ်တဲ့.....
ည ရောက်တော့ ပိတ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် တွေ အတွက် အကောင် ပလောင်တွေ အတွက်ဆို ပြီး သီးသန့် ဖူးခွင့် ရကြတယ်လို့ ကြားရပါတယ်..
စွယ်တော် အစစ် တာမှန်ရင် ဒီမြေပေါ်တောင် မကြွသင့် တော့ပါဘူး...သိပ်ကို အကျင့်ပျက်ပြီး...လုံးဝမသန့်ရှင်းတော့တဲ့ တိုင်းပြည် ဖြစ်နေပါပြီ..အာဖရိက က
ဆိုမာလီ နိုင်ငံတောင် မျော်လင့်ချက်ရှိပါသေးတယ်
ဆရာတော်ကြီးတွေလည်း အလှူအတန်း ကုသိုလ်ပြုဖို့ တရားပြကြပါတယ်။ ဘယ်လိုလှူရတန်းရမယ်ဆိုတာလည်း ဟောကြားကြပါတယ်။ နာယူတဲ့သူတွေက တလွဲဆံပင်ကောင်းနေကြတာရယ်၊ မီဒီယာတချို့ ရဲ့ အလံရှုးလုပ်တာတွေက လမ်းလွဲစေခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ထေရ၀ါဒ ဆရာတော်များကို နှိပ်ကွတ်ပြီး မဟာရနဗုဒ္ဒဘာသာကို အားပေးတဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့တွေမှာ တာဝန်အရှိဆုံးပါ။ မြတ်စွာဘုရားကလည်း ဒါတွေကို ကြိုတင်မြင်လို့ သာသနာတော်ရဲ့
သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ခဲ့တာလို့ ထင်ပါတယ်။
ထားလိုက်ကြပါတော့ဗျာ လှူခဲ့ပြီးသားဟာတစ်ခုကို ပြန်ပြေားနေလို့ ဘာမှမထူးပဲ ကုသိုလ်စိတ်ကနေ အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေရတယ်လေ
င့ါလှူလိုက်တယ် ဆိုပြီး ဘုရားကိုအာရုံပြု သာဓုခေါ်လိုက်ကြပေါ့ဗျာ.....ခုမှ တော့ စွယ်တော်အစစ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါလေတို့ နိုင်ငံရေးလေပြေထိုးတာပါတို့ ဆိုတာကို ဘေးဖယ်ပြီး ကုသိုလ်စိတ်သက်သက်ယူလိုက်ပါလားဗျာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်ပါတယ် ....
အော်လူတွေလူတွေ လူတွေမို့လို့လူတွေလို့ပြောတာပါအခက်ဆုံးဆိုတဲ့အထည့်မှာဒီလူတွေပါတယ် ဘယ်ဟာကိုအစစ်လို့သတ်မှတ်ပြီးလှူကြတာလဲ ဒါဆိုကျနော်တို့နိုင်ငံကဘုရားပုထိုး တွေကိုအတုလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလောက်လည်းမအကြပါနဲ့သတိကလေးထားကြပါကိုယ့်အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ဘုရားကိုရောဘယ်လိုသတ်မှကြသေးလဲနိုင်ငံတွင်းမှာလဲအများကြီးရှိပါတယ်
ဒါက မဟာယနကိုးကွယ်တာပါတရုတ်တွေက ကျနော်တို့နဲ့မဆိုင်လောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့လှူမယ်ဆိုတော့လှူပါမလှူနဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးကနော်တို့နိုင်ငံမှာလှူစရာနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့တပုံကြီးပါအစစ်ဆိုတာရောဘယ်သူပြောတာလဲဒီတရုတ်တွေက
ကျနော်တို့နိုင်ငံကရွှေတိဂုံကိုတောင်သယ်လို့ရရင်သယ်ယူချင်နေတာ နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးယူချင်နေတာ ဒီအလှူငွေတွေကိုဒီတရုတ်တွေမယူရင်ဘယ်သူယူမှာမို့လို့လဲ ကိုရင် စကားကိုကြည့်ပြောပါအုံး ကိုရင်ရယ် ဘာသာရေး ဟာဘာသာရေး နိုင်ငံရေးဟာ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကိုရင်ပြောမှာလားလူတိုင်းသိတာပေါ့ ဒီလိုစိတ်ကောင်ရှိနေရင်ကိုယ့်ခေါင်းကိုဒီလူတွေနင်းသွားမှာပေါ့ သူတို့တွေကဒီလိုစိတ်မျိုးမှမရှိတာကို ရတာကိုအကုန်လိုချင်နေတဲ့ကောင်တွေပါ နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ အဖို့တန်ရတနာတွေကို အစိုးရကလည်း သူ့တို့ရဲ့လှည့်ကွက်ထည့်မှာကိုရောက်တော့မှာပေါ့ သူတို့ကကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ကျနော်တို့နိုင်ငံကရသမျှ ရွေ ငွေ ကျောက် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သစ်တော အလကားရတယ်လို့မှတ်နေတာ အစိုးရကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကထွက်ပစ္စည်းတွေကိုဒီကောင်တွေကိုရောင်းစားတယ် သူတို့အစိုးရက ကိုယ့်နိုင်ငံ ရေလို ရင်ရေ မီးလိုရင် မီးရစေရမယ် ဘယ်ကဘဲ မသာမာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ရရ ဘယ်လိုဘဲရရ ရအောင်ရှာပေးတယ် တို့နိုင်ငံကျတော့ ရေလိုရင် ရေ ပြတ်စေရမယ် မီးလိုရင် မီး မလာစေရဘူး ကိုယ့်နိုင်ငံကိုဒီလောက်ချစ်တဲ့အစိုးရမမြင်ဖူးပါဘူး ရှိတဲ့ဟာတွေကိုတောင်လုပ်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး ခုရခိုင်ပြည်မှာ ရေတံခွန်တွေ ဓာတ်ငွေ့တွေပေါလို့ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုနွားတဲပါမကျန်ပေးလို့ရပါတယ် ဘယ်ကြောင့်လုပ်မပေးတာလဲ ရှင်းရှင်းလည်းဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုမချစ်လို့ပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ့်ထက်မသာစေချင်လို့ဘဲ သူများကောင်းစားမှာကိုမလိုလားဘူး ငါဘဲကောင်းစားမယ်ဆိုတဲ့ မိတ္ဆာဒိတ်ထိ စိတ်ဓာတ်တွေများနေလို့ဘဲ ခုတိုင်းရင်းသားတွေကိုတိုက်ခိုင်နေတယ် ဘယ်ကြောင့်လဲ တရားမျှတမှုမရှိလို့ဘဲ အစိုးရဆိုတာရှေးကို တစ်ပေလောက်ဘဲကြည့်လို့မရဘူး တစ်နိုင်ငံလုံး ကြည့်ရတယ် သူတို့ကြည့်တာ ဘာကိုကြည့်လဲသိလား ဟာဒီကောင်တွေ ဒီလူမျိုးတွေ ငါတို့ထက် သာသွားတော့မယ် ဖိထားအုံးမှဘဲလို့အမြဲတမ်းတွေးနေလိမ့်မယ်သူများနိုင်ငံက ချူစားရင်သူတို့သမီးကိုပါပေး ပါလိမ့်မယ် ပိုက်ဆံများရမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးနိုင်ငံကိုပါရောင်းစားပါလိမ့်မယ်တရုတ်ကိုခုလည်းကုန်နေပါပြီမြန်မားနိုင်ငံတစ်ဝက်ရောင်းစားလို့......အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်
ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော် ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပါတ်သို့ ရွှေ့ဆိုင်း
‘ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်’ကို ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်း၌ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပရန် ကြေငြာထားသော်လည်း ပွဲမိန့် မရသဖြင့် ကျင်းပမည့်ရက်အား ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပါတ်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး
ကော်မတီက ပြောသည်။ “သေချာကတော့ ၁၅ ရက်နေ့မှာ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ နောက်ထပ် မရွှေ့ရအောင် ရက်ကို ကျနော်တို့ ညှိနေတုန်းပါ။ ပွဲခွင့်ပြုမိန့်ကိစ္စကို ကြိုးစားရင်းက ရက်ရွှေ့ရတာပါ” ဟု ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ ပြန်ကြားရေးမှူး ဦးအုန်းကြိုင် က ပြောသည်။ ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲကျင်းပမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်နေရာတို့ကို ပြန်လည် သတ်မှတ်ကာ ကြေငြာပေး မည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းရန်ပုံငွေ ဖျော်ဖြေပွဲကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ၊ ပညာရေးကွန်ယက် အဖွဲ့များနှင့် အနုပညာရှင် များက ပူးပေါင်းစီစဉ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂီတတေးသံရှင် ၅၀ ကျော်တို့ သောကြာနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၅
ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်တွင်း တွေ့ဆုံစဉ်။ ဓာတ်ပုံ-
အစိုးရထံသို့လည်း လိုအပ်သည့် အထောက်အထား အပြည့်အစုံဖြင့် ပွဲကျင်းပခွင့် အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ တစုံတရာ အကြောင်းပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။ NLD
ဦးစီးကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ ပွဲမိန့်မရသဖြင့် ရက်ပြောင်းရွှေ့ သတ်မှတ်ရ (ဓါတ်ပုံ /nldburma.org)
ကျနော်တို့ကို ကူညီရတာဆိုတော့ သူတို့ မအားတဲ့ကြားက အချိန်တွေ ပြန်ညှိရတယ်။
ရက်ရွှေ့လိုက်တော့ ရောင်းထားတဲ့ လက်မှတ်တွေအတွက်လည်း ပြန်တောင်းပန်ပြီး ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပြောပြနေရတယ်” ဟု ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂီတအနုပညာရှင်များ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ
နေအိမ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးအတွက် ကူညီရန် ဂီတရန်ပုံငွေပွဲ ကို စီစဉ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
Emperor ၊ Metalzone ၊ Lazy Club ၊ Big Bag ၊ Plus3၊ Spectrum ၊ Reason
၊ Wanted ၊ Vertical Vibration ၊ The Tree အစရှိသည့် တီဝိုင်းများ နှင့်အတူ နာမည်ကျော် ဂီတ အနုပညာရှင် ၅၀ ကျော်က
ဈေးနှုန်များမှာ ကျပ် ငါးထောင်မှ ကျပ်သုံးသောင်းအထိ ရှိပြီး ကြိုတင်လတ်မှတ် ရောင်းချထားရာ ကျပ် ၁၅ သိန်းခန့် ရရှိထားသည်ဟု ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက ပြောသည်။
12/12/2011 07:31:00 PM
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ ဇာတ်ကား မိုးယုစံ လည်း ကူညီမယ်
ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အနုပညာရှင်သရုပ်ဆောင်များ တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာ မသွားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရိုက်ကူးမယ်ဆိုတာ သိရတဲ့အတွက် ကိုယ်လည်းတတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ကူညီသွားဖို့အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့ မိုးယုစံက… ”ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးမယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် မိုးယုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီလို့ရမယ့် နေရာက ကူညီသွားမှာပါ။ မိုးယုတို့ ပြောသံကြား တာကတော့ အငြိမ့်အဖွဲ့အနေနဲ့ ကူညီမယ်လို့တော့ ပြောသံကြားပါတယ်။ အဲဒီလိုကူညီဖို့ အကူအညီတောင်းလာလို့ရှိရင်လည်း ကူညီပေးသွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးမှာ မိုးယုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ နေရာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာ ဘယ်သူသရုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ လက်ရှိ သရုပ်ဆောင်လောကမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့လူ မရှိသေးတဲ့အတွက် အပြင်က ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တူတဲ့သူကို ရှာရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အပေါ် မိုးယုအမြင်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့.. ”အဲဒါကို ပိုသဘောကျတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် အဲဒီဇာတ်ကားရိုက်ပြီဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းရုံနဲ့တင် မဖြစ်ဘူးလေ။ ဇာတ်လမ်းက သိပ်ကိုနက်နဲပြီး အရေး ကြီးတဲ့ ဇာတ်လမ်းကြီးလေ။ သာမန်ရိုက်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အဓိကကတော့ အရင်ဆုံးမြင်တွေ့ရမှာက ရုပ်ကိုမြင်တွေ့ရမှာလေ။ အဲဒီအတွက် ဗိုလ်ချုပ် နဲ့တူတဲ့ ရုပ်မျိုးကို ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တူတဲ့ရုပ်ကို တွေ့ပြီးမှ နောက်ပိုင်းသရုပ် ဆောင်ပိုင်းတွေကို ဆက်ပြီး သင်ကြားပေးတာမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်။ ရုပ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးမှုကလည်း ဇာတ်လမ်းအတွက်ကို တစ်ဝက်နီးပါး အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်တယ်”လို့ သူ့ရဲ့ အမြင်လေးကို မိုးယုစံက ပြောပြသွားပါတယ်။
ပေါ်ပျူလာ ဂျာနယ် သစ်ထူးလွင်
12/12/2011 07:17:00 PM
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗဲလ်ဆု ရရှိခြင်း အနှစ် ၂၀ ပြည့် အခမ်းအနားတွင် ရွှေညဝါဆရာတော် မိန့်ခွန်းပြောစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
“ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့လို့လား၊ အမျိုးသားနေ့ အောင်ပွဲ ကျင်းပဖို့
လက်ခံခဲ့လို့လား၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ဖို့ တောင်းလို့လား၊ ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲ လေး၊ ငါး၊ ခြောက်ရက် ရှိနေပြီ၊ ဘုန်းကြီး ဘ၀တခုလုံးကို
အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေမယ့် ဖိအားတွေပေးနေတယ်။ ဘုန်းကြီး ဘ၀ တသက်တာ လုပ်ခဲ့သမျှ အခြေအနေတွေကို ဖျက်ဆီးမယ့် ဖိအားမျိုးတွေ ရင်ဆိုင် နေရတယ်” ဟု ရွှေညဝါ ဆရာတော်က ဆိုသည်။
“အဲဒီလို ရင်ဆိုင်ရလို့လည်း ဘုန်းကြီး စိတ်ဓာတ်မကျဘူး၊ မျက်နှာမပျက်ဘူး၊
ငါ့ဘ၀ ပျက်ချင် ပျက်ပစေ၊ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာ၊ အမှန်တရားအတွက် စွန့်လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးဘုန်းကြီးမှာ အပြည့်ရှိတယ်” ဟု ရွှေည၀ါ ဆရာတော်က ဆက်လက် မိန့်ကြားသည်။
“ပထမ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒုတိယ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တတိယ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ။ ကျမတို့ခေတ်မှာ အရင်ခေတ် အဆက်ဆက်က မရခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရနေပြီဆိုတဲ့ စိတ်တွေထားပြီးတော့ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အခွင့်အရေးဆိုတာ တခါတလေ တော်တော်နဲ့ ပြန်မလာတတ်ပါဘူး။ လာတဲ့အခါမှာ ရအောင် ဆုပ်ကိုင်ရမယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို အများအကျိုးအတွက် ဖြစ်အောင်လို့ သုံးစွဲသွားရမယ်။ အဲဒီလိုစိတ်နဲ့ ကျမတို့အားလုံး ဆက်ပြီးတော့ သွားနိုင်လို့ရှိရင် ကျမတို့ရဲ့ နိုင်ငံဟာ မကြာမီကာလမှာ အားလုံးလိုချင်တဲ့၊
ငြိမ်းချမ်းတဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခု ဖြစ်လာမှာပါ” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အပါအ၀င် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး အင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသားများ ကလည်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက်
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း တရားဝင် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန် တောင်းဆို နေကြသည်။
12/12/2011 06:32:00 PM
အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ် (ဓာတ်ပုံ - salailintan.blogspot.com)
ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းမှာ အဆိုတော် အနုပညာရှင်များ၊ တေးဂီတ၀ိုင်းများစွာ ပါဝင်ပြီး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပမယ်
ဆိုတဲ့ ဂီတပွဲကြီးက ပါမစ်မရသလိုလို၊ ပွဲပျက်မလိုလို သတင်းကြားနေပါတယ်။
တချိန်က လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရော့ခ်အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ်ဟာ “မဟာ” တေးစီးရီးခွေ ထွက်ရှိပြီးတဲ့ နောက် အဲဒီအခွေထဲက အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီသီချင်းတွေကြောင့် ပရိသတ် တချို့ရဲ့ ပြစ်တင် ဝေဖန်သံတွေနဲ့
အတူ အောင်မြင်မှုတွေ မှေးမှိန်ခဲ့ရတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ယင်းကဲ့သုပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုအတိုင်းအတာအများဆုံးရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတော်
စိုင်းထီးဆိုင်ဟာလည်း တေးရေးမြသန်းစံရေးစပ်တဲ့ စစ်အစိုးရ အကျိုးပြုပေါ်လစီ တေးသီချင်းတွေ သီဆိုခဲ့ သည့်နောက်ပိုင်း ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုအတိုင်းအတာလျော့နည်းသွားခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။
12/12/2011 06:23:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆနးစုကြည်နှင့် အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံမှု အပေါ် ဝေဖန်စာများမပြုသင့် ဟု ထွန်းအိန္ဒြာဗိုပြောကြား
ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်နေ့မှာ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များနဲ့ အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များ အတော်အသင့် စုံညီစွာလာရောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြပြီး ၂ဝ၁၅ဗိုလ်ချုပ်ရာ ပြည့်အမီ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမယ့် အကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါ တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ”ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိက မခြွင်းမချန် မကွယ်မဝှက်ဘဲနဲ့ ထွက်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားပဲ။
ဒီ အတွက်လည်း ဘယ်နေရာက ပံ့ပိုးရ၊ ပံ့ပိုးရ ကူညီသွားမှာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ကားရိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် မလို ဘူး။ သရုပ်ဆောင်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြော တာ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ ရေးသော်လည်း
ကောင်း၊အခြား အမေစုခိုင်းမယ့် ဘယ်နေရာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဇာတ်ကားကြီးထွက်ရှိရေး အတွက် ဘယ်နေရာကပဲ ခိုင်းခိုင်း တာဝန်ကျေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒ ပြင်းပြင်းပြပြရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုတာကို နောင်လာ နောက်သားကလေး လေးတွေကို သိရှိစေချင်တယ်။ အာဇာနည် နေ့ဆိုတာတောင်မှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုက တဖြည်းဖြည်းလျော့လာတယ်။နောက်ကလေး တွေဆို သိပ်တောင်မသိတော့ဘူး။ အာဇာ နည်နေ့ပြီးသွားတာ ဘာနေ့ပြီးသွားမှန်းတောင် သူတို့မသိတာဖြစ်လာတော့ ဒါလေး တွေက ပြန်ဖော်ထုတ်ဖို့ လိုကိုလိုအပ်တဲ့ အတွက် ဝိုင်းကူသင့်ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘဝအကြောင်း ရိုက်ကူး မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ သာမက၊ ကမ္ဘာမှာပါပြသမယ့် ဇာတ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် World wide လူတွေရိုက် မှ ပိုပြီးအဆင့်မီတယ်လို့ ပြောတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ”ဒီဇာတ်ကားက World wide သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် World wide က လူတွေ ဦးဆောင်ကြမှပဲ အဆင့်မီဖို့ပိုပြီး အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
အစ်မတို့ မြန်မာတွေ ကို အထင်သေးပြီး ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာတွေလည်း စိတ်ဓာတ်တွေရော၊သတ္တိ တွေရော အများကြီးရှိကြပါတယ်။ အတွေ့ အကြုံအားဖြင့် World wide အတွေ့အကြုံ ကတော့ ဈေးကွက်ဝင် World wide ဖြစ်နေပြီးသား လူတွေဆီကအကူအညီတွေလို လိမ့်မယ်၊၊ အဲဒါကြောင့်အမေစုက နိုင်ငံခြားက ပညာရှင် တွေကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ တာဝန်ယူထားတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်”လို့  ပြောပါတယ်၊၊ ထွန်းအိန္ဒြာ ဗိုက သူမလေးစားယုံကြည်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပါဝင်ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီး
မြန်မာနိုင်ငံကို စရောက်လာ တဲ့အချိန် ကစပြီး ဒီနေ့အချိန်ထိ လေးစားရင်ခုန် နေသူပါ။ ဂီတ အနုပညာရှင်များနဲ့အတူ ဇာတိ သွေး၊ ဇာတိမာန်တက်ကြွစေမယ့် သီချင်းစီးရီးခွေ စီစဉ်မှာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၅ရက် နေ့ မှာ အခွေရန်ပုံ ငွေပွဲမှာလည်း ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ပါဝင်သီဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အနုပညာရှင်များ ခုလို တွေ့ဆုံကြရတဲ့အတွက် တအားဝမ်းသာ
ပြီး အဲဒီ အပေါ် ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ”အနုပညာသမားအားလုံးက အမေစုကို ရှေးကတည်းက လူတိုင်းလေးစားပြီးသားပဲ။ တွေ့ခွင့်ရတာ၊ မရတာတစ်ပိုင်းပေါ့။ တွေ့ခွင့်ရ မှတွေ့တယ်။ တွေ့ခွင့် မရခင်ကမတွေ့ဘူး ဆိုပြီး ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုတွေကို မပြော သင့်ဘူးလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ အင်တာနက်တွေ ပေါ်မှာ ပြောနေ တာ တွေ့လို့ပါ။ အမေစုကို အနုပညာလောက က ဂီတရော၊ရုပ်ရှင်ရော၊သဘင်ရော တစ်ပြည်လုံးက လေးစား ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြ တာကတော့ လုံးဝငြင်းပယ်လို့မရတဲ့ အချက်ပါ” လို့ အနုပညာရှင်များနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်တွေ့ဆုံမှုအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။
12/12/2011 06:11:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဆန့်ကျင်ရေးဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်း (ရုပ်/သံ)
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မဲ့ ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဆန့်ကျင်ရေးနေ့အခမ်းအနားအတွက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနေ
ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းတိုလေးတခု ကို ပေးပို့ပြီး “နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟာ ကလေးသူငယ်များ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဆန့်ကျင်ရေးနေ့ ဆိုပြီးတော့ ကျွန်မတို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားဖို့ လိုတယ်”လို့ တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကို ကလေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုတားဆီးရေးအဖွဲ့
( Burma ACT) အဖွဲ့ကနေ ဦးစီးပြီး ဒီဇင်ဘာ (၁၂) ရက်မနက်ပိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့က ကလေးဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (Child Development Center-CDC) မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ရွာလူထုကို စွမ်းရည်မြှင့်
ခြင်းဖြင့် ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကို တားဆီးကြပါစို့ (Empower the communities to stop child trafficking) ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့အတူ ဒီအခမ်းအနားကို မဲဆောက်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ရွေ့ပြောင်းမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားမိဘတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက စည်စည်ကားကားကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်အခမ်းအနားမှာကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဆန့်ကျင်ရေးအကြောင်း ဟောပြောပွဲတွေ
အပြင်ပညာပးပြခန်းတွေကိုလဲ ဖွင့်လှစ်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေ့ပြောင်းကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေဦးစီးတဲ့ United ACT လူငယ်ပြဇာတ်အဖွဲ့ကလဲ ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဆန့်ကျင်ရေးပညာပေး ပြဇာတ်သစ်ကို တင်ဆက်မှာ ဖြစ်ပြီး
အခြားရွေ့ပြောင်းကလေးတွေရဲ့ အနုပညာတင်ဆက်မှုတွေလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပေါ် လူကုန်ကူးမှုတွေကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး နိုင်ငံတွေကပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့ ပါလာမိုစာချုပ်အသက်ဝင်လာတဲ့နေ့ ကို အစွဲပြုပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ကို ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဆန့်ကျင်ရေးနေ့လို့
သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တနေ့ထဲမှာဘဲ ထိုင်း၊ လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာ ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် လှုံ့ဆော်တဲ့အခမ်းအနားတွေကို ကျင်းပကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
By: Myanmar News Now သစ်ထူးလွင်
12/12/2011 12:37:00 PM
မှာတမ်း-၂ ............ ရေး/ဆို ။ ။ ဇေယျာသော်
မှာတမ်း-၂ ............ ရေး/ဆို ။ ။ ဇေယျာသော် မူးယစ်ဆေး သုံးဆွဲမှု အထူးသတိထားဖို့ ပညာပေး သီချင်းလေးပါ။ By: မိုးအေး (Facebook)
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကြီးနှင့် လွတ်လပ်သော သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်း
ရုပ်၏အာဟာရသည် ရုပ်ဝတ္ထုများဖြစ်ကြသော စားသောက်ဖွယ်ရာ အသား၊ ငါး၊ အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ဟင်းလျာများဖြစ်သကဲ့သို့ စိတ်၏အာဟာရမှာ သတင်းဖြစ်သည်။ လူ့သဘာဝဖြစ်သည့် မြင်ချင်၊ ကြားချင်၊ သိချင်သည့် အာရုံခံစားမှုများသည် စိတ်၏ အာဟာရဖြစ်သည်။ ယင်းခံစားမှုများကို သတင်းများမှတစ်ဆင့် ရယူကြရ၏။ လူနှင့် သတင်း သည် အစဉ်တွဲလျက်ရှိသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူတို့နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရေမြေ တောတောင်ကမ္ဘာကြီးသည် သတင်းများပင်ဖြစ်သည်။ စင်စစ်မိမိတို့နှင့်တကွ မိမိတို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးသည် သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ထွန်းနေသော စားသုံး၍မကုန်ခန်းနိုင်သည့် သတင်းရတနာသိုက်ကြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုက လွန်မည်မဟုတ်ပါ။လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကောင်းသော ဆောင်ရွက်ချက်များ မကောင်းသောပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များသည် ထိုသူ၏ ကောင်းသတင်း၊ မကောင်းသတင်းများ ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်နှင့် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သည်လည်း ထိုနည်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ စိမ်းလန်းစိုပြည်သာယာလှပသော
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များသည် မိမိတို့စိတ်ကို ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့စေသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဖောက်ပြန်လာသော သဘာဝမှပေးသည့် မီး၊ ရေ၊ လေ၊ ငလျင် ကပ်ဆိုးကြီးများသည် စိတ်နှလုံးကို ညှိုးနွမ်းစေပါသည်။ သည့်အပြင် မူလရှိရင်းစွဲ သတင်းအဖြစ်အပျက်အမှန်များ ရှိသကဲ့သို့ လူတို့ဖန်တီးသော သတင်းအတုအယောင်များလည်း ရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအား အမှန်ဖြစ်နေသည့်အတိုင်း ဆန္ဒစွဲမပါဘဲ ရှာဖွေစုဆောင်း စိစစ်တင်ပြခြင်းနှင့် အချိန်မီဖြန့်ဝေခြင်းသည် လွတ်လပ်သော သတင်းဖြစ်စဉ် ဖြစ်သည်။ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်
မိမိဆန္ဒစွဲဖြင့် တင်ပြခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့သည်သတင်းမဟုတ်ဘဲ အတင်းအ ဖျင်းကောလာဟလ၀ါဒီဖြန့်ချိရေးသက် သက်သာဖြစ်သည်။ မိမိဆန္ဒစွဲဖြင့် တင်ပြဖြန့်ချိသော သတင်းများသည် တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းဥပဒေဘောင်များဖြင့် လိုရာဆွဲ၍ ပုံသွင်းထားသည့် ပုံစံခွက်ကြီးများဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သည့်သတင်းဖြစ်စဉ်တွင် လွတ်လပ်မှုရှိ၏၊ အနှောင်အဖွဲ့ကင်း၏၊ ယုံကြည်စိတ်ချအားကိုးမှု ရှိ၏။ မည်သည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု မရှိချေ။ သတင်းလက်ခံရယူသူများ၊ သတင်းစားသုံးသူများအတွက် မိမိယုံကြည်ရာ ရွေးချယ်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသည်။ သတင်း၏ အသက်သွေးကြောသည် လွတ်လပ်မှုဖြစ်သည်။ သတင်းလောကတွင် အမြဲရင်ဆိုင်နေရသော ဆန့်ကျင်ဘက်အရာများဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်တရားများမှတစ်ဆင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးနှင့် စစ်အေးကာလတွင် သတင်းမီဒီယာအုပ်စုကြီးနှစ်ခု ကွဲပြားလျက်ရှိသည်။ လွတ်လပ် သောကမ္ဘာဟုခေါ်သည့် ကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းနှင့် သံဆန်ခါအုတ်တံတိုင်းကြီးများ၏နောက်ကွယ်မှ အရှေ့ကမ္ဘာ၏ သတင်းမီဒီယာအုပ်စုကြီးများဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းစစ်ဝါဒီဖက် ဆစ်အာဏာရှင်များသည် သတင်းကို မိမိလိုရာဖန်တီးပြီး ၀ါဒဖြန့်ချိရေး လက်နက်သဖွယ်အသုံးချကြသည်။ ဂိုး အားရင်းဂိုးဘယ်တို့သည်ထင်ရှားသော ဖက်ဆစ်ဝါဒဖြန့်ချိရေး ပညာရှင်များ ဖြစ်သည်။ အနောက်ကမ္ဘာတွင် သတင်းလုပ်ငန်းများကို အစိုးရက ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပြုဘဲ ပုဂ္ဂလိကများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသဖြင့် ပိုမို၍ သတင်းလွတ်လပ်မှုရှိသည်။ အရှေ့ကမ္ဘာတွင်မူ သတင်း လုပ်ငန်းကြီးတစ်ရပ်လုံးအား အစိုးရမှ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲ ချုပ်ကိုင်ထားရှိသည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးနှင့် စစ်အေးကာလသည် သတင်းလောကအတွက် သဘောတရား (Ideological Warfare) နှင့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး (Propagenda Warfare) သတင်းစစ်ပွဲကာလဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဆန်းသစ်တီထွင်လာသော ခေတ်မီကိရိယာများ နည်းပညာများ သတင်းလောကနှင့် ချိတ်ဆက်မိလာသည့် အနောက်ကမ္ဘာမီဒီယာ လုပ်ငန်းသည် ပိုမိုပွင့်လင်းထင်သာမြင်သာ လွတ်လပ်မှုရှိလာပါသည်။ လူတိုင်းပြောနိုင်ဆိုနိုင် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားနိုင်ခွင့်များရှိလာကြပြီး အုပ်စိုးသူအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ရဲဝံ့စွာပြန်လည် ဝေဖန်အကြံပြုကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာအုပ်စိုးသူ တာဝန်ရှိသူများမှလည်း ပြည်သူ့အသံ ဆန္ဒသဘောထားတို့ကို လျစ်လျူရှုခြင်းမပြုဘဲ အလေးထား၍ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ သာဓကအနေဖြင့် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကာလအတွင်း အမေရိကန်နစ်ကဆင် အစိုးရလက်ထက်တွင် ကမ္ဘာကျော်ဝါးတားဂိတ်အမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အစိုးရနှင့်သတင်းစာတို့၏ တရားရုံးတွင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့သည့်ကမ္ဘာကျော် အမှုတွဲကြီးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဗဟိုတရားရုံးချုပ်မှ အမှန်တရားကို ဖော်ပြရေးသားသော နယူးယော့တိုင်းမ်သတင်းစာကြီးကို အနိုင်ပေးခဲ့သည်။ နစ်ကဆင်အစိုးရကလည်း ဂုဏ်သိက္ခာ အကြီးအကျယ်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုနိုင်ငံ၏ တရားမျှတလွတ်လပ်သော တရားစီရင်ရေးစနစ်သည် အမှန်ပင် ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ၀ါးတားဂိတ်စီရင်ထုံးမှာ
လွတ်လပ်သော သတင်းလောကကြီးအောင်ပွဲနှင့် သမိုင်းမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး သတင်းအပေါ် မှီခိုအားထားရမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများ တိုးပွားလာသည်။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးနှင့် ဟန်ချက်ညီနေသော လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသည့် အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်သော သတင်းလှိုင်းလုံးကြီးများ ရေစီးကြောင်းများကို ဟန့်တားပိတ်ဆို့ ကာကွယ်ခြင်းမပြုနိုင်သော ကမ္ဘာကျော် ဘာလင်တံတိုင်းကြီးနှင့်
ထူထဲသိပ်သည်းသော သံဆန်ခါများမျော ပါ ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးနောက် သဘောတရားစစ်ပွဲစစ်အေးကာလကြီးလည်း နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။
နှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်အလွန် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီး ကော်ပိုရိတ်ကြီးများ ကောပရေးရှင်းကြီးများ၏နေရာတွင် အံ့မခန်းဆန်းပြားသော ခေတ်သစ်နည်းပညာများ တစ်ဟုန်ထိုး အစားထိုးဝင်ရောက်လာသည်။ နည်းပညာသစ်များနှင့် သတင်းလောကတို့ ပေါင်းစပ်ထား သည့် ယနေ့အချိန်ခါကို သတင်းနှင့်နည်းပညာခေတ် (Information and
Technology) အိုင်တီခေတ်ဟု ခေါ်ဝေါ်နေကြပေပြီ။ ဖေ့ဘွတ်၊ တွစ်တာ၊ ဘလော့ကာ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်၊ အင်တာနက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်း၊ ဂြိုဟ်တု စလောင်းအစရှိသော နည်းပညာများ ဖြင့် လူတစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့် (Individual rights and Freedom) ပိုမိုရရှိလာကြသဖြင့် သတင်းဖလှယ်မှု ဖြန့်ချိမှုများ စက္ကန့်မိနစ်မခြား အဆက်မပြတ် လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့လာသည်။ မည်သည့်အခါမျှ စိတ်ကူး၍မရသော အ လွန်ကြီးမားကျယ်ပြောသည့် ကမ္ဘာကြီးအား ရွာကြီးတစ်ရွာအဖြစ် ပြောင်းလဲဖန်တီးပေး ခဲ့သည်မှာ အိုင်တီဟုခေါ်သော သတင်းနှင့်နည်းပညာ ဖြစ်သည်။ မိမိအိမ်မှနေ၍ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ဈေးရောင်းဈေးဝယ် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မိမိအလိုရှိရာ နှစ်သက်ရာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှ တေးဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို အားကစားပွဲများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများသို့ ကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်ဘဲ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းခွေများ ပေးပို့နိုင်ခြင်း၊ ယုတ်စွအဆုံး အိမ်ထောင်ဖက်များကို ရှာဖွေရွေးချယ်နိုင်ခြင်းများကို သတင်းနှင့်နည်းပညာက ဆောင်ကြဉ်း ပေးနေပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ သတင်း(Meassage) များကို မိမိကိုယ်တိုင် လက်ခံနိုင်သကဲ့သို့ ဖြန့်ချိမှုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူတိုင်းပါဝင်နေသော လူထုမီဒီယာ သတင်းလောကကြီးတွင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် အလိုအလျောက်ပါဝင်နေသော သတင်းသမားများ ဖြစ်နေကြသည်။ နိုင်ငံအသီးသီးတွင် စီလီကွန်တောင်ကြားများ အိုင်စီတီသတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အပြိုင်အဆိုင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ကြသည်မှာ အားကျဖွယ်ဖြစ်သည်။ သတင်းလောကသည် ရပ်တန့်မနေဘဲ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ဆက်လက်စီးဆင်းလျက် ရှိပါသည်။
အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးတို့သည် လွှတ်တော်အတွင်းစည်းမှ မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ ပြည်သူ့အသံဆိုသည်မှာ လည်း လွှတ်တော်အပြင်စည်းမှ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကြီးဖြစ်သည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူ့အသံတို့ ပေါင်းစည်းမှု မဏ္ဍိုင်ကြီးလေးရပ်၏ အောင်ပွဲရလဒ်ဖြစ်သည် . . . မကြာမီကဖြစ်ပွားခဲ့သော အာရပ်နွေဦး ပြည်သူအုံကြွမှုကြီးတွင် တိုင်းပြည်အာဏာနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အမွေရထားသောပစ္စည်းကဲ့သို့ သဘောထားပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်စိုးခဲ့ကြသည့် အာရပ်အာဏာရှင်များသည် လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းလာသော သတင်းရေစီး ကြောင်းအား နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဟန့်တားပိတ်ဆို့ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသော်လည်း ပိုမိုပြင်းထန်သော သတင်းရေစီးကြောင်းတွင် မျောပါသေကျေပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးနောက် ပိုမိုပွင့်လင်းလွတ်လပ်သည့် ခေတ်သစ်သို့ စတင်ချီတက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ဘာလင်တံတိုင်း ကြီးပြိုကျပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ဤသည်ပင်လျှင် ယနေ့ မိမိတို့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ခံစားသိရှိနေရသော ဖုံးကွယ်ပိတ်ဆို့ဟန့်တား၍မရသော လွတ်လပ်ညင်သာစွာစီးဆင်းနေသည့် သတင်းနှင့်နည်းပညာ၏ မြင်ကွင်းဖြစ်ပါသည်။သတင်းဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သည့် စာနယ်ဇင်းသတင်းလောကကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သတင်းရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း မှန်ကန်အောင်စိစစ်တင်ပြခြင်း အချိန်မီဖြန့်ချိခြင်းတို့သည် တရားဝင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သတင်းလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ စာစီစာရိုက်၊ ကာလာသွင်း၊ ဓာတ်ပုံဒီဇိုင်း၊ ခေါင်းကြီးပိုင်း အရေးအသား အပြင်အဆင်အထားအသိုတို့မှာ သတင်း၏ အတတ်ပညာပိုင်း ဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ သတင်းစားသုံးသူများအား ဆွဲဆောင်သည့်အတတ်ပညာ ဟူ၍လည်း ခေါ်နိုင်ပါသည်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးနှင့် ချိန်ဆက်ထားသော မြူးမြူးကြွကြွ အလှအပများနှင့် တန်ဆာဆင်ထားသည့် ကြော်ငြာမီဒီယာလုပ်ငန်းကြီးများကလည်း သတင်း
လောကကို ပိုမိုဝေဆာမြိုင်ဆိုင်စေ ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်စစ်ပွဲကြီးများ၊ လူထုအုံကြွမှုများ၊ အဓိကရုဏ်းကြီးများကြားတွင် ဗွေဆော်ဦးသတင်းရ ယူရှာဖွေရသော
သတင်းသမား၊ သတင်းထောက်သမားအများအပြား အသက်ပေးစွန့်၍ ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ အ သက်ပေးဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ အကြမ်းအနုစုံသော သတင်းလောကဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပြီး ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် လွှတ်တော်များ ပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်၍ ကိုယ်စားလှယ်များသည်
အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေး အကြံပြုညှိနှိုင်းကြသည်။ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ
အများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အနည်းစုက လိုက်နာကြရပြီး သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးတွင် လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဥပဒေများ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းကြသည်။ အများစုကလည်း ကျန်အနည်းစုအပေါ်တွင် လေးစားမှုရှိရမည်။ မိမိတို့ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ပေါ်လစီမူဝါဒများကို သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ တီဗီအစရှိသော သတင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ပြည်သူများထံ တင်ပြအစီရင်ခံရပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရ၏ ပေါ်လစီများတွင် အားနည်းအားသာချက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသော အချက်များကို အလွှာအသီးသီးတွင် ပါဝင်သော ပြည်သူများသည် မိမိတို့၏ သဘောထားအမြင်ကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ သတင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်တင်ပြခွင့်ရှိသည်။ ပြည်သူ့အသံ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့သဘောထားဖြစ်သည်။ စင်စစ် မီဒီယာဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးနေရာ ဒေသတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပြည်သူနှင့် အစိုးရအကြား ဆက်သွယ်ပေးထားသော ကြားခံပေါင်းကူးတံတား၊ ကြားခံကိရိယာတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးတို့သည် လွှတ်တော်အတွင်းစည်းမှ မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ ပြည်သူ့အသံဆိုသည်မှာလည်း လွှတ်တော်အပြင်စည်းမှ စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင်ကြီးဖြစ်သည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့အသံတို့ပေါင်းစည်းမှု မဏ္ဍိုင်ကြီးလေးရပ်၏ အောင်ပွဲရလဒ်ဖြစ်သည်။ တစ်ဆက်တည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ရေး ပေါ်လစီများချမှတ် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင် အတွေးအခေါ် အသိတရားခေါင်းပါးမှု (Poverty of Thougnt) နှင့် ဓနဥစ္စာချို့တဲ့မှု(Poverty of Wealth) ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ အတွေးအခေါ်အသိပညာ ပိုမိုမြင့်မားတိုးတက်ရေးသည် ဓနဥစ္စာကြီးပွားရေးထက် ပိုမိုအရေးကြီးပါသည်။ မိမိတို့ရိုးရာဆိုရိုး စကားအတိုင်း မရှိတာထက် မသိတာက ပို၍ခက်သည်။ အတွေးအခေါ် အသိပညာမှန်ကန်ထက်မြက်ရန် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်။ ကော်ပရိတ်၊ ကော်ပရေးရှင်းများတွင် အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်၊ တီထွင်ဖန်တီးသူများကို ခေါ်ယူခန့်ထား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ ကုမ္ပဏီများ၏ အရင်းအနှီးအမြတ်အစွန်းမှာ တီထွင်ဖန်တီးမှု အကြံဥာဏ် တွေးခေါ်မှုများပင်ဖြစ်သည်။ လူ့အရင်းမြစ်မှ (Human Resource) မှ အကြံဥာဏ် အတွေးခေါ်များဖြင့် သဘာဝအရင်းမြစ် (Natural Resource) တို့ မှန်ကန်စနစ်ကျစွာ
ပေါင်းစပ်နိုင်မှ ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီအပြီး ပြာပုံကြားမှ ရုန်းထခဲ့ရသော ဂျာမနီ၊ ဂျပန်တို့၏ တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်မှုများသည် အတုယူဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ထိုနိုင်ငံများနှင့်အတူ အထူးသဖြင့် အိမ်နီးချင်း စင်ကာပူနိုင်ငံတို့တွင် သဘာဝအရင်းမြစ်များ လွန်စွာနည်းပါးပါသည်။ မိမိတို့၏ အကြံကောင်းများ မှန်ကန်သော အတွေးအမြင်အယူအဆများဖြင့် ကမ္ဘာ့အရှေ့တန်းနိုင်ငံများသို့ အရောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။
အသိတရားခေါင်းပါးမှု၊ ချို့တဲ့မှုပပျောက်ရေးလုပ်ငန်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သတင်းမီဒီယာအခန်းသည် အဓိက ပါဝင်ပါသည်။ မီဒီယာကဏ္ဍ ပိုမိုထင်သာမြင်သာ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်မှုရှိလာလေလေ အတွေးအခေါ် အကြံဥာဏ်များ ပိုမိုရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျင်းပနေသော စီးပွားရေး၊လူမှုရေးဆိုင်ရာ (Forum) (Seminar) ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေး အကြံပြုစာတမ်းတင်သွင်းနေသော အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များသည် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကြီးကို ကိုယ်စားပြုနေခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတို့ ရှစ်တန်း၊ ကိုးတန်းကျောင်းသားဘ၀တွင် သင်ကြားခဲ့သော တော်စတွိုင်းဝတ္ထုတို လေးပုဒ်မှ (Ivan The Fool) အိုင်ပင် အရူးဟူသော ၀တ္ထုတိုကို သင်ယူခဲ့သည်။ ဆရာကြီးတော် စတွိုင်း၏ ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးကာယ၊ ဥာဏအလုပ်အား ပိုင်းကိုသရော်ထားသည့် စာပြောင်ဝတ္ထုဖြစ်သည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမရှိဘဲ ကာယအားကိုးဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသော(Ivan)ကို အရူးဟု ပြောင်လှောင် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတို့ ဘိုးဘွား၊ လယ်ယာလုပ်သားများသည် မိုးလင်းမှမိုးချုပ် ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ သမားရိုးကျ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်က ဆန်အများ အပြားတင်ပို့သည့် နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အခြားနိုင်ငံများမှ တီထွင်ဖြစ်ထွန်းလာသော စက်မှုလယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို ရေရှည်တွင်မယှဉ်နိုင်တော့ပေ။ ယခုဆိုလျှင် အကျိုးအမြတ်နည်းပါးသော လယ်ယာမြေမှ လယ်ယာမြေလုပ်သားများ အ ခြားနိုင်ငံများသို့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ထွက်ခွာနေကြပြီဖြစ်သည်။ အကြံဥာဏ်အတွေးအခေါ် ဆန်းသစ်တီထွင်သည့် ဦးနှောက်မပါဝင်သော လုပ်ငန်းများသည်(Ivan) အရူးပင်ဖြစ်သည်။သတင်းလောကကိုဖျက်ဆီးသည့် ဗိုင်းရပ်စ် Virus ပိုးများလည်း အမှန်ပင်ရှိပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမြှောက်ပင့် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှု (Personal Cult) နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စော်ကားမှု (Personal Attach) ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆည်းကပ်မှုသည် လွန်ကဲသောမြှောက်ပင့်ခြင်းဖြစ်၍
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စော်ကားတိုက်ခိုက်မှုသည် မလိုလားအပ်သော ဂုဏ်သိက္ခာချိုးနှိမ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သတင်းလောကကြီးအားအကြီးမားဆုံး ဖျက်ဆီးသည့် ဗိုင်းရပ်စ်(Virus) ပိုးများဖြစ်ပါသည်။ မ.ဆ.လ ခေတ်ကဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်လုံးဆိုင်ရာ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံကျင်းပမည့်အချိန်က ဖြစ်သည်။ စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာက(နာမည်ကို မဖော်ပြလိုပါ ကွယ်လွန် သွားပြီဖြစ်သည်) ထိုစဉ်က နိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအား တပ်မတော်ကြီး၏ ဖခင်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းဖြစ်ကြောင်း သူ၏စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်းတွင် မြှောက်ပင့်ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့ညီလာခံ တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းသည် မိမိမှာမွေးစားဖခင်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်၏ ဖခင်အရင်းအစစ်အမှန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်၍ ရိုးသားစွာဝန်ခံသွားပါသည်။ ဖ.ဆ. ပ.လ ခေတ်တွင် ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ် သူဦးနုအား ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးဟု ၀ိုင်းဝန်းပုတ်ခတ်ရေးသားကြသည်ကို ၀န်ကြီးချုပ်သည် ပြုံးပြုံးကြီး သည်းခံခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ အရှိထက်ပိုမိုလွန်ကဲသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမြှောက်ပင့်မှုနှင့် တစ်ဖက်သား၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ချိုးနှိမ်ရေးသားသော ကလောင်ရှင် ဗိုင်းရပ်စ်(Virus)များသည် ပြည်သူလူထုဟူသော
နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်နှင့် တွေ့ထိသည့်အခါ ကွယ်ပျောက်သွားရသည့်အပြင် မိမိကလောင်နှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်ဟာ ရာကီရိပြုလုပ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်များအတွက် လွှတ်တော်ကြီးများ ဖွဲ့စည်းတည်ရှိသကဲ့သို့ စတုတ္ထသတင်းမဏ္ဍိုင်ကြီး၏ သတင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအတွက် အလွှာအသီးသီးပါဝင်သော လွတ်လပ်သော သတင်းအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ် မလွဲမသွေ တရားဝင်အကောင်အထည်ဖော် ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘက်လိုက်မှုကင်းသော ဆန္ဒစွဲမရှိသော ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော၊ လွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်ရမည့်အပြင် ပြည် သူ့အသံ ဆန္ဒသဘောထားများကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးစသည့် အချက်များသည် သီးခြားရပ်တည်နေသော အရာများမဟုတ်ဘဲ သံကွင်းဆက်များကဲ့သို့ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်နွှယ်နေ သော ကွင်းဆက်ပြဿနာများဖြစ်၍ တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်း စည်းချက်ကျကျ ဟန်ချက်ညီညီ အားသွန်ခွန်စိုက် ပြောင်းလဲရမည့်အရာများ ဖြစ်ည်။ ထိုသို့ တစ်ပြိုင်တည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွင် လွတ်လပ်မှုကို အခြေပြုသည့် အလွှာအသီးသီးပါဝင်သော စတုတ္ထသတင်း မဏ္ဍိုင်ကြီးသည် အရေးကြီးသောအခန်းမှ ပါဝင်သည်။''သူများနိုင်ငံတွင် ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းရင် ကျုပ်တို့က လေး၊ ငါးလှမ်း ပိုပြီးလှမ်းရလိမ့်မယ်။ ဒါမှတော်ရုံကျမယ်''ဟု အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မကွယ်လွန်မီ ရက်အနည်းငယ်က ကြိုတင်သတိ ပေး နှိုးဆော်မိန့်ဟခဲ့သည်။
ခုန်နေစရာလည်းမလိုပါ၊ ရပ်နေ၍လည်း မရပါ၊ မှန်မှန်အပြင် မြန်မြန်သွက်သွက် ခြေလှမ်းစိပ်စိပ် လျှောက်လှမ်းရန်တော့ လိုမည်ဖြစ်သည်။ စံချိန်စံညွှန်းကောင်းကောင်းဖြင့် ပိုမိုလျင်မြန်သွက်လက်နေသော အခြားပြိုင်ဘက် ပလေယာများ မိမိတို့အား ကျော်ဖြတ်သွားပြီး ပန်းအ၀င်တွင် နောက်ကျကျန်ရစ်နေသော မိမိတို့အား လက်ပြနှုတ်ဆက်နေကြသည်။ မနာလိုသည်တော့မဟုတ် စိတ်ထဲတွင်တော့ မချင့်မရဲနှင့် ဘ၀င်မကျ တစ်ခုခု လိုနေသည်ကတော့ အမှန်ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သော တရားဝင်စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်း ပြီးဖြစ်သော မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်မှ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကြီးမှ မလွဲမသွေ ဖွဲ့စည်းရမည့် လွတ်လပ်သောသတင်းအဖွဲ့အစည်းများ တက်ညီလက်ညီ ရွက်စုံတက်စုံဖွင့်၍ အပြန်အလှန် ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ခြင်းသာလျှင် ဒီမိုကရေစီ ဦးတည်ချက်သို့ ပိုမို လျင်မြန်စွာ အရောက်လှမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော ပြည်သူတို့၏ သတင်းစကား၊ သတင်းနားများတည်ရှိရာ လွတ်လပ်သော သတင်းအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ သတင်းတံခါးကို အမြန်ဆုံး ဖွင့်လှစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါသည်။
Written by ဦးဇော်(အောင်ဆန်း) သစ်ထူးလွင်
12/12/2011 12:11:00 PM